Igwefoto bọtịnụ | Zuta ihe nti, igwefoto ma lelee maka ịghọ aghụghọ ule - eXamYo.com
The eXamYo Cam Igwefoto bọtịnụ bụ mmezu zuru oke iji mee nke gị ule ya na nke gi eXamYo Micro Earpiece.
Ọ bụ naanị ya igwefoto n'ime ụwa nke na - enye gị ohere ịgbasa video ikuku na ozugbo site WiFi, 3G ma obu 4G. Enweghị eriri, Ọ dịghị kaadị SIM, Enweghị ego efu. Dakọtara na ngwaọrụ ọ bụla: KọmputaWindows, Mac), Mobiles na Mbadamba ()Android, iOS) na ọnụahịa na-enweghị atụ!
Iomi ule odighi mfe: na eXamYo Cam ị nwere ike igosi onyonyo nke gị ule nyemaka onye inyeaka gị, na-enweghị ịkọ ya, kachasi akwa!
eXamYo Cam Button Igwefoto
Nke kacha mma igwefoto maka ule nke ahia.
Detuo na ule na nchekwa zuru oke, igwefoto obere bọtịnụ.
Gwuo Live video ya na onye na - enyere gi aka inyocha ule na-enweghị njedebe nke anya.
Naanị nke 100% ikuku igwefoto.
Ngwa ule zuru ezu, kwekọrọ na kọmpụta, smartphones ma ọ bụ mbadamba.
Na eXamYo Cam Button Igwefoto ị nwere ike gafere ule ọ bụla mfe!
$ 99.00 TINYE NA ỤGBỌ IBU